Iqhuma kumasende - Yonke into ekufuneka uyazi ngempilo yakho | Amadoda aneSitayile
UAlicia tomero | 08/11/2021 21:52 | Ukunyamekela, Kufanelekile, ZeMpilo
Inkangeleko ye iqhuma kwisende Ngokuqhelekileyo yimeko engakhokelela kuhlobo oluthile lwengxaki enkulu ekufuneka ihlalutywe. Amanye amadoda ayawaqaphela lawo ukubonakala ngokungaqhelekanga okanye ngenxa yokuba iqabane lakho liyifumene.
Iqhuma kwityhalarha alithethi umhlaza, nangona kufuneka wenziwe isifundo esinzulu ngotyelelo lwengcali, ekubeni ukubonakala kwayo akuthethi ukuba nentlungu, okanye ukopha, okanye nantoni na efanayo. Ukunyuka komthamo kule ndawo kunokubonakala kobunzima ngaphandle kokungaphezulu, kodwa kufuneka kuhlalutywe ngokweenkcukacha.
1 Kufuneka ajongwe njani amasende?
2 Wazi njani ukuba iqhuma linokuba ngumhlaza?
Kufuneka ajongwe njani amasende?
Ukuba ufuna nje yenza iscan, akukaze kube mva kakhulu ukuba ulindele ukufunyaniswa okunokwenzeka. Lo mnxeba uya kusikhumbuza ngokuphonononga okwenziwa ngabasetyhini kumabele abo, apho kuya kufuneka ukuba bathinte ngezandla ukuze babone ubukho bolunye uhlobo lotshintsho oluncinci, amaqhuqhuva okanye ubukhulu obungafanelekanga.
Kwezinye iimeko olu hlobo lophononongo lufikelelwa ngenxa yokuba uhlobo oluthile lwe Intlungu emazantsi esisu, kwi-groin, i-scrotum okanye i-scrotum. Uphawu lwesivusi luya kuba xa lujongwa iqhuma elincinci kumasende kwaye loo mpahla yangaphantsi iyaqina kwaye incinci.
Amadoda amaninzi, nokuba awaqapheli nto, afuna ukuba njalo isheke yesiqhelo ukujonga ukuba konke kulungile. Isende ngalinye kuya kufuneka licandwe ngokwahlukileyo, ngesandla esinye isende libanjwe kwaye ngesinye isandla kuya kufuneka ukuba yenza iscan. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuyimfuneko ukunika uphawu lwe-alamu xa kukho ukwanda kwevolumu kwi-testicle, okanye ukuvakalelwa kobunzima obungabuhlungu, ngale ndlela kuya kufuneka ukuba uhanjelwe yingcali.
Elona xesha lilungileyo loviwo kunini uphantsi kweshawari okanye ibhafu, ngale ndlela ulusu lwe-scrotal luya kukhululeka ngakumbi. Njengoko sele sihlolisise, kuya kufuneka ukuhambisa elinye lamasende kwelinye icala kwaye uhlolisise kwelinye ukuba kukho uhlobo oluthile lobukho obufana iqhuma okanye ukudumba. Kuya kufuneka ujonge nokuba unobungakanani obulinganayo phakathi kwetyhalarha kunye nelinye, kwaye ukuba nabo banobude obufanayo okanye ukunqunyanyiswa.
Ubhontsi kufuneka ujikelezwe kwaye isende lishukunyiswe ngobunono ukubona nakuphi na ukungafezeki okanye xa kuvela iqhuqhuva. Kufuneka chukumisa i-epididymis, enye yeendawo apho amadlozi akhuliswa khona. Ibekwe phezulu nangasemva kwetyhalarha ngalinye kwaye imile okombhobho. Kuyimfuneko ukukhangela ukuba akukho hlobo lwe-anomaly lufunyenwe.
Enye indawo yokucofa iya kuba "i-conductor eyahlukileyo", olunye uhlobo lombhobho obhityileyo kunye nobude obuphuma kwi-epididymis kwaye iya kuba ne-texture egudileyo. Qaphela ukuba akukho hlobo lweqhuma okanye iqhuqhuva. Xa elinye lamacala lihlolisisiwe, kuya kufuneka ukuba liphindwe kwenye indawo.
Wazi njani ukuba iqhuma linokuba ngumhlaza?
Kwiimeko ezininzi, iqhuma kwityhalarha ayingomhlaza. Inokuvela ngokubetha okukhulu, apho ulwelo luqokelelene ngeenxa zonke kuyo, okanye ngokulula ukusuka kwi-cyst. Ugqirha oyingcali uya kwenza uvavanyo olukhulu kunye nokuhlola.
Ngaphakathi kokuba uphethwe ngumhlaza kunokumiselwa ukuba kukho izinto ezinobungozi okanye unohlobo oluthile lwembali yosapho, ngale ndlela ulandelelo luyakuxatyiswa kakhulu. Ukuba iba ngumhlaza, inokwaziwa ukuba nayo inezi ntlobo zeempawu:
Ukubonakala kweqhuma elingaqhelekanga, ngenkangeleko okanye ubume obungenzekiyo.
Dolores okanye ezininzi ezicaphukisayo kwi umva, ngakumbi kumazantsi esisu kunye neentlungu ezithile kwi-scrotum.
Ububele okanye intlungu emabeleni. Ngamanye amaxesha kuvela amaqhuma.
Ugqirha kufuneka enze a Uvavanyo lwazo zonke ezi mpawu kwaye uqale ukongeza iimvavanyo ezingakumbi zoxilongo oluqinisekileyo. Ultrasound Iya kuba lolunye lweemvavanyo, apho unokuhlola ukuba ngaba kukho umhlaza wamatyhalarha. Uvavanyo luya kwenziwa kwakhona njenge tomografía ikhomputha (CT) okanye i-magnetic resonance imaging (MRI) ukufumanisa ukuba inayo kwaye isasazekile. Uvavanyo lwegazi luya kuqinisekisa nolunye ulwazi olongezelelweyo.
Kwiingcebiso ezininzi zezonyango abantwana abaninzi okanye abantu abaselula sele beza nale ngxaki. Uninzi lwezi meko zibonakala zineqhuma elikhulu kangangokuba kubonakala ngathi zinelinye isende, kodwa oku akufuneki kuthathwe njengento eyothusayo.
Ngaphambi kokuthandabuza okanye uphawu olungafanelekanga kufuneka uye kwagqirha kuvavanyo olukhulu kwaye kwangethuba. Kuya kufuneka unike ngakumbi ukubaluleka kumakhwenkwe aselula xa befumana la maqhuma, njengoko kwiimeko ezininzi ayilophawu luhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iqhuma kwisende